ပလေးစတေရှင် ပေါ့တေးဘဲလ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ပလေးစတေရှင် ပေါ့တေးဘဲလ် (PlayStation Portable၊ တရားဝင်အတိုကောက် PSP) သည် ဆိုနီ မှ ထုတ်လုပ်သော လက်ကိုင်ဂိမ်းစက် တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဆိုနီ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကာ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်တွင် လည်းကောင်း၊ မြောက်အမေရိကတွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း အသီးသီးရောင်းချခဲ့သည်။
မူလမော်ဒယ် PSP-1000 နှင့် PSP အမှတ်တံဆိပ်
JPN ၂၀၀၄၁၂၁၂ဒီဇင်ဘာ ၁၂, ၂၀၀၄
NA ၂၀၀၅၀၃၂၄မတ် ၂၄, ၂၀၀၅
PAL ၂၀၀၅၀၉၀၁စက်တင်ဘာ ၁, ၂၀၀၅
NA ၂၀၁၄၀၁ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၄
JPN ၂၀၁၄၀၆ဇွန် ၂၀၁၄
ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းလုံး၌ သန်း ၈၀ (နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃ အထိ)
480 × 272 pixels with 16,777,216 colors, 16:9 widescreen TFT LCD, ၃.၈ လက်မ (PSP GO), ၄.၃ လက်မ (All other models)
စတူဒီယို စပီကာ၊ မိုနို စပီကာ (PSP-E1000)၊ မိုက်ခရိုဖုန်း (PSP-3000, PSP Go)၊ ၃.၅ mm နားကြပ်ပေါက်
၇၄ mm (h)
၁၇၀ mm (w)
၂၃ mm (d)
၇၁ mm (h)
၁၆၉ mm (w)
၁၉ mm (d)
၆၉ mm (h)
၁၂၈ mm (w)
၁၆.၅ mm (d)
Monster Hunter Portable 3rd (၄.၆ သန်း) (မေ ၆၊ ၂၀၁၁ အထိ)
ပလေးစတေရှင် ပေါ့တေးဘဲလ် သည် Universal Media Disc (UMD) ဟုခေါ်သည့် စနစ်ကို အဓိကသိုလှောင်မှုစနစ်အဖြစ် အသုံးပြုထားသည့် တစ်ခုတည်းသော လက်ကိုင်ဂိမ်းစက် ဖြစ်သည်။ အခြားသိသာထင်ရှားသည့် အချက်များမှာ ကြီးမားသည့် ဖန်သားပြင်ပါဝင်ခြင်း၊ ပလေးစတေရှင် ၂၊ ပလေးစတေရှင် ၃ စသည့် ဂိမ်းစက်များနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း နှင့် အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အစောပိုင်းတွင် ပိုမိုပါးလွှာပေါ့ပါးသည့် ပလေးစတေရှင် ပေါ့တေးဘဲလ် မော်ဒယ်အသစ် PSP-2000 ကို ဖြန့်ချိရောင်းချခဲ့ရာ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံတွင် မူလထက် လေးဆခန့် ပိုမိုရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး၊ အောက်တိုဘာလတွင် မြောက်အမေရိက၌ ၂၀၀% နီးနီးအထိ အရောင်းမြင့်တက်သွားခဲ့သည်။ ဖန်သားပြင်အသစ်နှင့် အသံဖမ်းမိုက်ခရိုဖုန်း တစ်ပါတည်းပါရှိသော နောက်ထပ် မော်ဒယ်အသစ် PSP-3000 ကိုလည်း ထပ်မံဖြန့်ချိခဲ့သည်။ လုံးဝ ဒီဇိုင်းပြုပြင်ထားသည့် PSP Go ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဈေးသက်သာအောင် ဖန်တီးထားသည့် PSP-E1000 ကိုလည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
PSP မျိုးဆက် ဂိမ်းစက်များ၏နောက်တွင် ပလေးစတေရှင် ဗီတာ ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မြောက်အမေရိက၊ ဥရောပနှင့် ဩစတြေးလျတို့တွင် လည်းကောင်း အသီးသီး ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ပလေးစတေရှင် ပေါ့တေးဘဲလ်များ တင်ပို့ရောင်းချမှုကို မြောက်အမေရိကတွင် ၂၀၁၄ ဇန်နဝါရီတွင် လည်းကောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၁၄ ဇွန်တွင်လည်းကောင်း ရပ်ဆိုင်းခဲ့ကာ၊ ဥရောပတွင် ၂၀၁၄ နှစ်ကုန်တွင် ရပ်ဆိုင်းမည် ဖြစ်သည်။
RAM နှင့် Internal Storage
USB 2.0, UMD, Serial Port, Headphone Jack, Memory Stick PRO Duo 802.11b Wi-Fi, IRDA 32 MB, 32 MB System Software MIPS R4000 at 1~333 MHz 4.3 in 16:9 TFT at 480 × 272, 16.77 million colors ၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၄ (ဂျပန်နိုင်ငံ) PSP System Software 1.005V DC 1800 mAh, Upgradeable to 2200 mAh ရပ်ဆိုင်း
USB 2.0, UMD, Video Out and Microphone, Headphone Jack, Memory Stick PRO Duo 802.11b Wi-Fi 64 MB, 64 MB System Software ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ PSP System Software 3.605V DC 1200 mAh, Upgradeable to 2200 mAh ရပ်ဆိုင်း
[USB 2.0, UMD, Video Out, Microphone, Headphone Jack, Memory Stick PRO Duo ၂၀၀၈ အောက်တိုဘာ PSP System Software 4.20 ရပ်ဆိုင်း
All in One Port, Headphone Jack, Mic, Memory Stick Micro (M2) 802.11b Wi-Fi, Bluetooth 2.0 + EDR 64 MB, 16 GB User and System Software Shared 3.8 in 16:9 TFT at 480 × 272, 16.77 million colors, sliding screen ၂၀၀၉ အောက်တိုဘာ PSP System Software 5.705V DC Non Removable Battery ရပ်ဆိုင်း
USB 2.0, UMD, Headphone Jack, Memory Stick PRO Duo No 64 MB, 64 MB System Software  4.3 in 16:9 TFT at 480 × 272, 16.77 million colors ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ PSP System Software 6.505V DC Non Removable Battery ထုတ်လုပ်ဆဲ
↑ Sony to Stop Selling PlayStation Portable by End of Year - TIME။3June 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3June 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Untold Legends: The Warrior's Code။ Sony။ 12 November 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2007-06-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Platinum Titles။ Capcom။ 2011-05-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ PSP Japanese launch impressions။ 1UP (2004-12-11)။ 25 August 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-03-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Thorsen၊ Tor (2005-03-24)။ The US PSP Launch။ GameSpot။ 2008-03-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ E3 2003: PSP Press Release။ gamedaily.com (2003-12-31)။ 23 March 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-03-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Support – PSP – Movies။ Sony Computer Entertainment။ 15 March 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-03-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ PSP Slim Release Quadruples UK Sales။ Gamasutra (2007-09-21)။ 2008-03-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Klepek၊ Patrick (2007-10-18)။ September NPD။ 1UP။ 2008-03-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
↑ "Sony to Stop Selling PlayStation Portable by End of Year"၊ Time၊ Time Inc.၊3June 2014။4June 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on3June 2014။
↑ PSP E-1000 Review။ PSP E-1000 Review။ Eurogamer။ 21 February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikimedia Commons တွင် PlayStation Portable နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
PSP ဩစတြေးလျ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် Archived 14 September 2009 at the Wayback Machine.
PSP နယူးဇီလန် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် Archived 1 December 2008 at the Wayback Machine.
PSP ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ် Archived 21 April 2007 at the Wayback Machine.
PSP အမေရိကန် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်
PSP ကနေဒါ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် Archived6July 2011 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပလေးစတေရှင်_ပေါ့တေးဘဲလ်&oldid=671551" မှ ရယူရန်
၁၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၃:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၃:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။